Hidha Haaromsaa: Ijaarsi hidha haaromsaa guddichaa harkifate - BBC News Afaan Oromoo
Hidhi guddichi pirojaktii biyyaalessaa kan qabeenyaa ummataafi biyyaattiin hojjetamu waan ta'eef, yeroo hundumaa qalbii lammilee hundaa keessa jira.
Torban muraasa darban keessa taateewwan uumaman ammoo caalaatti hidhicha mata duree haasaa taasiseera.
Jalqaba haasawaa minsitrri mummichaa biyyatti ijaarsi hidhiichaa haala amma deemaa jiruun kan itti fufu yoo ta'e waggoota kurnan dhufan keessattuu hin xumuramu jedhan xiyyeeffannoo midiyaalee argatee ture.
Itti aansee ammoo hogganaa mummeen hidhichaa Injinar Simmanyaw Baqqalaa, hidhichaaf akka fakkeenyaatti eeraman ajjeefamunsaanii waa'een hidhichaa caalaa akka dubbatamu taasiseera.
Du'a injinar Simmanyaw booda ibsa kan kenne Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Humna ibsaa, ijaarsi kutaa siivil injinariisaa sadarkaa gaarii irratti kan argamu yoo ta'u, kutaan ijaarsa elektiro mekaanikaalii isaa jechuunis hojii ijaarsa jenereetara tarbaayinaa duubatti harkifachusaa ibseera.
Hojii elektiroo mekaanikaalaa kana hojjetaa kan ture dhaabbata METEC jedhamudha.
Pirojektoonni kanfaltii dabalatee sababiiwwan adda addaatiin hojiin isaanii harkifatuu mala, ijaarsa hidha haaromsaas haaluma walfakkaatutu mudate jedhu hojii raawwachiftuu mummeen Humna Elektirikii Itoophiyaa Injinar Azeeb Asinaaqa.
Image copyright ENN
"Yoo ijaarsi sibiilaa xumuramu, konkiriitii guutuun itti fufa, isaan bodas ijaarsi sibiilaa isaa itti fufa. Haala akaasiitiin hojichi kan hojjetamu."
Rakkoon hojii elektiroo mekaanikaalaa harkifachuun ijaarsa waliigalaa hidha kana akka harkifatu sababa ta'uu himu.
Kontaraaktaroota birkii (Sub- contractors) muuxanoo qaban hojii elektiro mekaanikaalaa gargaaran galchuun rakkina gama sanaan mudate hiikuuf yaalamaa akka jiru Injinar Azeeb ni himu.
Kaanaan dura baatiiwwan lamaan dhufan keessatti tarbaayinoonni lama humna omishuu akka eegalan karoorfamee ture.
Piroojektichi uumamaan walxaxaa ta'uu irraa kan ka'e ammatti kana mirkanneessuun rakkisaa ta'uu injinar Azeeb himaniiru.
''Fulbaana dhufutti kun ni ta'a jechuun rakkisadha, haa ta'u malee yunitiiwwan jalaqabaa lamaan hojii akka eegalaniif ariitiin hojatamaa jira,'' jedhu.
Hojiin ijaarsa pirojektichaa harkifachuu isaatiin dhaabbanni biyya Italii hojii ijaarsaa kana hojjetu Saaliinii Konistiraakshin beenyaa gaafatee jira.
Kontiraaktarri gaaffii akkasii gaafachuun kan barameedha jedhu inijinar Azeeb. Kanaafis Gibee sadii fi Ganaalee Dawaalee akka fakkeenyaatti eeraniiru.
"Kanfaltiin yoo turu, yeroo humna namaa fi maashinaroota hoji malee yoo dhaabu miidhaan narra gaheera jechuun kontiraaktarri gaaffii beenyaa ni dhiyeefata" jedhu.
Gara hojiitti kan galamu erga xumurameen booda osoo hin taane dizaayina bu'uuraa hojjachuun waan ta'eef, dizaayina bu'urichaatiin ala erga gara hojiitti galame dhimmi hin eegamiin mudachu mala, kunis gaaffii beenyaa kaasuu mala jedhu.
Ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa irratti haalli teessuma lafaa ykn ji'oolojii hin eegamne mudatee akka ture himu.
Haalota akkanaatiin Saaliniinis gaaffii walfakkaataa dhiyeesseera jedhu.
Jalqaba wayita kontiraati mallatteefamutti ALA bara 2014 jenerataroonni lama, bara 2018tti ammoo hundumtu hojii akka eegalan yaadamee ture.
Haa ta'u malee, bara 2014 ka'ee hanga ammaatti adeemsi ijaarsa hidhichaa gaggeefamaa osoo jiruu jeneretaroonni jedhaman ammalleen hojii eegaluu dadhabuun isaanii, adeemsi ijaarsichaa baayyee boodatti harkifachuu mul'isa kan jedhan hin dhabamne.
Haala kanaanis jeneretaroota kanneen lamaaniyyuu hojii eegalchiisuun qormaata akka ta'u sodaa jiraachus maddeeni ni himu.
Kooriyaa Kibbaatti vaayirasiin hammaannaan manni barumsaa deebi'ee cufame
Tiwiitar maxxansa Tiraamp ''seera hokkora leellisuu'' cabseera jechuun akka hin mul'ane dhorke
Hokkora Miniyaapolis hordofee humni eegumsa biyyaalessaa bobbaafame
Booranatti sa'a baqaqsani wal'aanutti milkoofne jedhu ogeeyyiin
'Oromiyaa fi Amaaraatti waggaa tokkotti namni 160 ol humnoota mootummaan ajjeefame'
Mooskootti lakkoofsi namoota sababa Covid-19 du'an irra deebiin qoratame
Ajjeechaawwan 11 gara-jabina poolisiin US gurraachotaaf qaban agarsiisan
'Mootummaan dhiiga mucayyoo kiyyaa haa naa barbaadu'